Asakantom-panoherana Hong Kong: zavatra mavo · Global Voices teny Malagasy
Manondro ny mpanao-fihetsiketsehana iray ho zavatra mavo ny police HK
Voadika ny 08 Desambra 2019 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, नेपाली, українська, русский, English
Lasa meme [sary-sy-soratra] an'aterineto ny voambolana “yellow object” [zavatra mavo] tao Hong Kong rehefa nisy vondrona polisy misahana ny rotaka azo lahatsary nandaka mpanao fihetsiketsehana iray tao amin'ny lalana ho an'ny mpandeha an-tongotra maizina tao Yuen Long tamin'ny 21 Septambra 2019. Ny ampitso, nilaza tamin'ny mpanangom-baovao ny mpifehy ny bemidin'ny polisy, Vasco Gareth Llewellyn Williams, fa ny lahatsary dia “mampiseho izay toa heverina ho polisy iray mandaka zavatra mavo amin'ny tany”. Nisy mpanao gazety iray nihiakiaka tao amin'ny toerana hoe , “Olombelona io fa tsy zavatra!”
Ity tranga ity no ohatra iray hafa amin'ny fanaovan'ny polisy ny mpanao fihetsiketsehana ho tsy olombelona. Efa nampiasa ny voambolana “kadradraka” ny polisy hanondroany ireo mpanao fihetsiketsehana mandritra ny bemidina. Naelin'ny vondrona mpanohana ny fitondrana sy ny seha-baovao tao amin'ny media sosialy ny voambolana avy eo. Maro no nanondro fa ny fampiasana voambolana manaisotra ny mahaolombelona tahaka izany no mety hitaraka fankahalana sy handrisika ny polisy hampiasa herisetra rehefa hisahana mpanao fihetsiketsehana milamina.
Mandritra izany fotoana izany, miteraka aingam-panahy amin'ny zavakanto andalambe maro dia maro ihany koa ny herisetra ambava mihatra amin'ny mpanao fihetsiketsehana. Ny talaky mason'ny tanàna no nitondra ireo mpanao soritsoritra fandravahana miisa 18 hiaraka hanao fampirantiana :
Mampiatrano ny fampirantiana nanomboka tamin'ny 21 novambra ka hatramin'ny 8 desambra 2019 ny Openground Cafe. Malalaka ny fitrohana sy ny fizarana ny ranty rehetra fa tsy misy copyright.